यी हुन् करोडौंको सम्पत्ति भएका बलिउडका १० नायिका, जान्नुहोस् कसको सम्पत्ति कति ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यी हुन् करोडौंको सम्पत्ति भएका बलिउडका १० नायिका, जान्नुहोस् कसको सम्पत्ति कति ?
यी हुन् करोडौंको सम्पत्ति भएका बलिउडका १० नायिका, जान्नुहोस् कसको सम्पत्ति कति ?
भदौ २५ गते, २०७६ - १५:५४
काठमाडौं । फिल्ममा अभिनय गरेर सबै अभिनेत्रीहरु सफल हुँदैनन् । सफल भएपनि केही समय हुन्छन् र फेरि हराउँछन् । फिल्म क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कलाकारको उपस्थिति भइरहन्छ । तर, निरन्तर काम, दाम नाम कमाउने कमै नायिकाहरु छन्।
दाम कमाउनेहरु पनि कमै हुन्छन् । अनि कमै त्यस्ता नायिकाहरु जो करोडौंको सम्पत्तिका मालिक पनि बनेका छन् । बलिउड क्षेत्रमा रहेका केहि नायिका जो करोडौंका धनि पनि छन् । आज हामी तिनै करोडौंको सम्पत्तिको मालिक बनेका त्यस्ता १० नायिकाको चर्चा गर्न गइरहेका छौं जो बलिउडकै धनी १० अभिनेत्रीमा पर्छन् ।
३४ वर्षीया दीपीका पादुकोण १० अभिनेत्रीमा सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने नायिकामा पर्छिन् । उनी ४५ मिलियन डलरकी मालिक हुन् । २००७ मा ओम शान्ति ओमबाट भारतीय सिनेमा जगतमा छिरेकी यी अभियनेत्रीलाई सफलताले कहिल्यै छोडेन । उनको पछिल्लो फिल्म पद्मावत हो । उक्त फिल्मका लागि उनले १३ करोड भारु लिएकी थिइन् । उनले २००७ देखि अहिलेसम्म झण्डै २७ फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
प्रियंका चोपडा ४० मिलियन डलरकी मालिक्नी हुन् । संसारभरी चर्चित रहेकी प्रियकाले पप गायक निक जोनशसँग विहे गरेकी छन् । ३७ वर्षीया यी नायिका मिस वल्र्ड २००० की विजेता पनि हुन् ।
माधुरी दिक्षीत १० अभिनेत्रीमा सबैभन्दा बढी कमाउनेमा तेश्रो नम्बरमा पर्छिन् । ३५ मिलियनकी मालिक्नी उनी भारतीय महिलामा सबैभन्दा सुन्दर नायिकामा पर्छिन् । ५२ वर्षीया यी नायिका अहिले पनि त्यति नै सुन्दर देखिन्छन् । माधुरी दिक्षीतलाई हिन्दी फिल्म क्षेत्रकी सबैभन्दा सफल अभिनेत्री पनि मानिन्छ । उनले आफ्नो फिल्मी कैरियर १९८४ मा ‘अबोध’ फिल्मबाट अभिनयको सुरुवात गरेकी थिइन् ।
ऐश्वर्या राय तमिल फिल्म क्षेत्रबाट आएकी नायिका ऐश्वर्या रायको पहिलो हिन्दी फिल्म ‘और प्यार हो गया’ रहेको छ । १९९४ मा मिस वल्र्डको ताज पहिरिएकी यी नायिका ३५ मिलियन डलरको मालिक्नी हुन् । भारतका सबैभन्दा लोकप्रिय अभिनेताको नाम कमाएका अमिताभ बच्चनका छोरा नायक अभिशेक बच्चनसँग विवाह गरेकी ऐश्वर्याको एक छोरी पनि छन् ।
प्रिति जिन्टा ३० मिलियन डलरकी मालिक्नी हुन् । तेलगु, अंग्रेजी तथा हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरेकी प्रितिजिन्टाको पहिलो फिल्म १९९८ मा बनेको ‘दिलसे’ रहेको छ । ४४ वर्षीया यी नायिकाले बिबिसी अनलाईनमा धेरै लेख लेखेकी छन् । उनी क्रिकेट टिम किंग्स हष् पंजावकी मालिक पनि हुन् । उनी अहिले चलचित्र क्षेत्रमा खेलेकी छैनन् ।
विद्या वालन २५ मिलियन डलरकी मालिक हुन् । ४० वर्षीया यी नायिकाले बंगाली फिल्मबाट फिल्म क्षेत्रमा कदम राखेकी हुन् । हिन्दी सिनेक्षेत्रमा उनको पहिलो फिल्म ‘परिणीता’ हो ।
अनुष्का शर्माको सम्पत्ति २५ मिलियिन डलर रहेको छ । मोडलिङबाट आफ्नो कैरियर सुरु गरेकी अनुष्काले २००८ देखि हिन्दी फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो कदम राखेकी हुन् । उनको पहिलो फिल्म ‘रब ने बनादी जोडी’ रहेको थियो । उनले २०१७ मा चर्चित क्रिकेट खेलाडी विराट कोहलीसँग विवाह गरेकी छन् ।
अमृता राव २०।५ मिलियन डलरकी मालिक हुन् । उनी १० धनी अभिनेत्रीमा ८ औं नम्बरमा पर्छिन् । मोडलिङबाट आफ्नो कैरियर सुरु गरेकी उनको पहिलो फिल्म ‘अबके वरस’ रहेको छ । उनको ‘वेलकम टु सज्जनपुर’ लगायतका फिल्म चर्चित रहेका थिए । ३८ वर्षीया यी नायिका दुई दर्जन बढी फिल्ममा अभिनेत्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।
काजोल पनि भारतीय १० अभिनेत्रीमा धेरै कमाउनेमा नवौं नम्बरमा पर्छिन् । उनी १६ मिलियन डलरकी मालिक हुन् । ४५ वर्षीया काजोलले ‘बेखुदी’ नामक हिन्दी फिल्मबाट आफ्नो कैरियर सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले अभिनय गरेका बाजिगर, दिलवाले दुल्हनिया लेजाएंगे लगायतका फिल्म हिट रहे । उनले २० वर्ष अघि नायक अजय देवगन संग विवाह गरेकी थिइन् ।
सबैभन्दा बढी कमाउने १० औं नम्बरमा सोनाम कपुर पर्छिन् । उनी १५ मिलियन डलरकी मालिक हुन् । ३४ वर्षीया यी नायिकाको पहिलो फिल्म ‘सावरिया’ रहेको थियो । उनले प्रेम रतन धन पायो, प्याडम्यान लगायतका फिल्ममा अक्षय कुमार तथा सल्मानखान जस्ता बलिउडका चर्चित नायकसँग मुख्य भूमिकामा खेलेकी छन् । उनको सबैभन्दा राम्रो भूमिका ‘निरजा’ मा रहेको बताइन्छ । उनी नायक अनिल कपुरकी छोरी हुन् । एजेन्सीको सहयोगमा
भदौ २५ गते, २०७६ - १५:५४ मा प्रकाशित